BattlEye inoshanda neValve kune yayo Steam Play rutsigiro | Linux Vakapindwa muropa
Chokwadi unotoziva Valve Anti-Kubiridzira (VAC), Ndokunge, anti-kubiridzira system. Kana iri BattleEye Ndiyo imwe hurongwa hwerudzi irworwo kudzivirira vatambi kubva mukubiridzira pavanotamba uye kana ikaona kuti vari kubiridzira vacharambidzwa kuitira kuti vagadzire mutambo wakaenzana mukati mehurongwa hwevazhinji. Zvakanaka, zvinoita sekunge vakasimbisa kuti vanoshanda neValve kupa rutsigiro mukati meStam Play / Proton.
Asi chinonakidza pano ndechekuti nguva pfupi yapfuura, kubva kuBattlEye ivo vakasimbisa kune sosi yekuti ivo vaizongova nerutsigiro rwekuzvarwa Linux vhidhiyo mitambo, uye kana uchipinda muSteam Play izvi hazvingadaro, pachave nekutsigirwa kwemapuratifomu akasiyana Nhau idzi dzese dzinouya kubva kumubvunzo wakaitwa mune runyorwa rwemeseji uko vanogadzira chishandiso ichi vakasimbisa kuti havana rutsigiro rwepamutemo rweWine, asi kuti vakashanda pamwe neValve kutsigira Proton.
Zvichida nhau dzinoita sedzisina kunakidza, nekuti iri imwe yeAnti-Cheat system, kana pamwe nekuti zvinowanzoitika kuti musimudziri akataura chimwe chinhu obva agadzirisa oti mumwe. Asi isu tinogona kuongorora izvo zvingave zviri shure kweizvi uye pamwe zvinonakidza kupfuura iyo nhau pachayo. Zvichida mune ramangwana Mutambi Asingazivikanwe Hondo Nhandare inogona kuridzwa paLinux kubva paStam Play? Izvi zvinogona kuita kuti zvinhu zvive nyore, pasina mubvunzo ...
Kunyangwe Valve irikuita basa rayo rechikoro reLinux yenyika yekutamba, kuchine mitambo yakawanda isingakwanise kutambwa pachikuva. Steam Tamba / Proton kubva kuLinux, nekuti dzimwe nyaya dzehunyanzvi dzinozvidzivirira kunyangwe hazvo iko kuiswa kweWini kunotibvumidza kumhanya yemuno mitambo yemavhidhiyo yeWindows pane yedu distro. Imwe yacho ndeyekuti mitambo yakawanda inoshandisa iyi Anti-Cheat software uye kuti BattleEye inoshanda paStam Play ichareva kuti chipingamupinyi ichocho chinobviswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » BattlEye inoshanda neValve nerutsigiro rwayo pane Steam Play
ExTiX 19.5 Yakaburitswa zviri pamutemo neLinux Kernel 5.1